दीपकराजलाई नवीना लामाको प्रश्न, तपाईं श्रीमतीसँग त्यति देखिनुहुन्न किन होला ? - IAUA
ramkrishna September 18, 2017	तपाईं श्रीमतीसँग त्यति देखिनुहुन्न किन होला ?दीपकराजलाई नवीना लामाको प्रश्न
दीपक: पक्कै पनि हामी सामाजिक प्राणी हौँ । यही माटोमा मरेर खाली हात जाने हो । म अलिकति अध्यात्ममा पनि विश्वास गर्छु । तर, अहिले म करिअरको पिक आवरमा छु । अहिले कलाकारितामै योगदान गर्नु छ । त्यसपछिको समय सामाजिक काम र राजनीतिमा संलग्नता जनाउने छु । तर, अहिले पनि मेरो कमाइको केही प्रतिशत पैसा सहयोग गरिरहेको छ।
दीपक ः हजुरको प्रश्न जायज छ । अरूको विषयमा भन्दा पनि मैले आफ्नो कुरा गर्छु । हामीले कमर्सियल फिल्ममा पनि सुर्के थैलीजस्तो थुम्का जोडेर गीत राख्यौँ । सुर्के थैली खै, पूर्वपश्चिम रेल, सुन त चम्पाजस्ता लोकलयमा आधारित गीत राखेर संस्कृति संरक्षणमा टेवा पु¥याएजस्तो लाग्छ । अहिले झ्याम्म झ्याम्म गीत राखेर लोकगीतलाई हामीपछिको पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै छौँ ।
दीपक: सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो । लोकसंस्कृति कुनै एकजनाको पेवा हुँदैन । सबैको साझा सम्पत्ति हो । त्यसलाई प्रयोग गर्दै लानुपर्दछ । झ्याम्म झ्याम्म पनि अलग प्रस्तुतिका साथ हामीले पुनप्र्रयोग गरेर नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरेका हौँ । यो त पुण्यको काम हो जस्तो लाग्छ । यसलाई हामीले यही माटोमा सारेका छौँ । अमेरिका लगेर बेचेका त छैनौँ नि ? जुन नाइलनको साडीमा भन्ने गीतको प्रसंग छ । त्यसमा संकलकको नाम छुटाएका थियौँ । त्यो सच्याइसकेका छौँ । अर्को कुरा गीत प्रोड्युसरले चोर्दैन, संगीतकारले चोर्ने हो । यसमा ‘काम गर्ने कालु, चोट पाउने भालु’जस्तो भएको छ ।
Previous Previous post: घरमा टांग्नुहोस् सुन्दर महिलाको तस्बिर, सम्पत्ति बढ्नेछ !
Next Next post: घुम्नका लागि छाडे जागिर, तर बने करोडपति